MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardCookies mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT Club Diamond & Platinum : (၁) လအခမဲ့ Cookie Plan + 1 Free new moive
(၂၀) ရက် အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၂၀ အထိ
၁။ Cookie Promo Code ကို MPT မှ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း SMS ဖြင့်ပေးပို့ပါမည်။ SMS အမည် “ MPTStayHome” အားစစ်ဆေးပါ။
၂။ ရရှိလာသော Promo Code အား Cookie application တွင်အသုံးပြုပါ။
၁။ ယခုအစီအစဉ်သည် SMS ရရှိသော MPT Club Diamond နှင့် Platinum အသုံးပြုသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။
၂။ ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ (၂၀) ရက် အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၂၀ အထိဖြစ်သည်။
၃။ Diamond နှင့် Platinum level အတွက် Cookie Plan (1 month subscription) နှင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အသစ်တစ်ကားကို အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤပိုမိုးရှင်းအား MPT Club Diamond နှင့် Platinum အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလျှင်တစ်ကြိမ်သာခံစားခွင့်ရှိပါသည်။
၄။ Promo code အား MPT မှ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း SMS ဖြင့်ပေးပို့ပါမည်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အသစ်တစ်ကား အတွက် နောက်ထပ် SMS Promo code ကို ပရိုမိုးရှင်းကာလ ပြီးဆုံးလျှင် ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်သည်။
၅။ SMS Promo code အား Cookie application တွင် ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် Cookie ဆုလက်ဆောင်အားခံစားနိုင်ပါမည်။ SMS Promo code ရရှိပြီးနောက် ရက် (၃၀) အတွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၆။ Cookie ၏ application တွင် SMS Promo code ထည့်သွင်းပြီးပါက 1-month subscription အားစတင်ပါမည်။
၇။ Cookie App အတွင်း ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်သံလိုင်းများ ရှာဖွေခြင်း၊ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းများအတွက် အင်တာနက်အသုံးပြုခ ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၈။ Cookie promo code အသုံးပြုသူ (၄၀,၀၀၀) အထိသာအရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။
Cookie app ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်
(၁) Cookie ရဲ့ ပရိုမိုးရှင်းကို မည်သူတွေက ခံစားခွင့်ရနိုင်မလဲ?
(၂) ယခု ပရိုမိုးရှင်းရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေက ဘာတွေလဲ?
Diamond နှင့် Platinum level အတွက် Cookie Plan (4,900 plan) (1 month subscription) နှင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအသစ်တစ်ကား ကို အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဤပရိုမိုးရှင်း အား MPT Club Diamondနှင့် Platinum အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး လျှင် တစ်ကြိမ်သာခံစားခွင့်ရှိပါသည်။
(၃) Cookie ပရိုမိုးရှင်းကို ဘယ်လို ရရှိ နိုင်မလဲ?
Promo code အား MPT မှ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း SMS ဖြင့်ပေးပို့ပါမည်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အသစ်တစ်ကား အတွက် နောက်ထပ် SMS Promo code ကို ပရိုမိုးရှင်းကာလ ပြီးဆုံးလျှင် ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်သည်။
(၄) Cookie TV App ကို ဘယ်လို ဒေါင်းလုတ်ရယူမလဲ?
Cookie TV App ဒေါင်းလုတ်ရယူထားခြင်းမရှိသောသူများအနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်များ တွင် ၀င်ရောက် ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) Cookie ပရိုမိုးရှင်း ခံစားခွင့်ကာလမှာ ဘယ်ထိလဲ?
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ (၂၀) ရက် အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၂၀ အထိဖြစ်သည်။
(၆ ) ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် ဒေတာအသုံးပြုခ တစ်စုံတစ်ရာ ကျသင့်မည်လား?
Cookie App တွင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၊ ရုပ်သံလိုင်းများ ရှာဖွေခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဒေါင်းလုတ် ရယူခြင်း စသည့်အတွက်ကိုတော့ ဒေတာအသုံးပြုခကျသင့်ငွေပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) Cookie ပရိုမိုးရှင်း နှင့် ပက်သက်၍ မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်များရှိပါသလဲ။
Cookie promo code အသုံးပြုသူ ၄၀,၀၀၀ အထိသာအရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။
(၈) MPT Club ကို မည်သို့ အဖွဲ့ဝင်ရမည်နည်း။